Ngocezwana savvy ukuhlela umzila kanye nezimo isheduli, ungakwazi ngempela kalula bakhipha ndawonye uhambo ezokwenza uhambo nje umxhwele njengoba uya khona.
Ngenxa amabanga amabili entabeni, igcwele amachibi ezinhlanu, amagquma ugingqe, futhi lamachweba ophithizelayo, kukhona inkatho of kokwehluka eNorth Italy, ngisho amafushane. Ungaqala isonto lakho lokushushuluza kumaDolomites, laze mayelana e Lake Como futhi ukuqeda uhambo sizitika kwasolwandle Izindawo ezinhlanu!
Khona-ke, kunjalo, kunamadolobha amabili adumile aseMilan futhi I-Venice ukuthola eNorth of Italy! Themba nami uma ngithi, zonke isivakashi uzothola okuthile uthando lapha.
Ukuze unenkululeko kakhulu, kumele ukuqasha imoto lapho uhamba ukubona Lakes ezahlukene Northern Italy. Uma ufuna ancike yomphakathi zokuthutha, kuyenzeka impela.
Lakes e Northern Italy – Ichibi Como
Ichibi Como, obeye aziwe njengo Lario, ungowesithathu ngobukhulu emachibi asenyakatho ne-Italy, nge cishe ukujula esiphezulu 410 amamitha (448 amayadi angu), Ungomunye namachibi ejulile eYurophu.
Sise unyawo I-Alps, Lake Como inikeza esinye kakhulu olunothile censorious emhlabeni. Uma uya ukuvakashela namachibi Italian, uyoba umangale ukuzwa ngezinto eziningi ukwenza e Lake Como ngaphandle udumo zokubona!
Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile ngifike Northern Italy zemininingwane ayingenisiwe-brainer, sizovuma ukushayelela ukugibela isikebhe kuhle futhi. Ikakhulukazi uma ufuna nakho Lake Como ngokukhethekile at zizinhle.
Lake Garda ingenye Lakes ngobukhulu e Northern Italy elikhulu kunawo wonke kuleli chibi glacial amachibi Italy abahlanu, eyayithelelwa I-Alps enyakatho. Enyakatho Verona, Lake Garda umndeni kakhulu – namanzi ezemidlalo ngamakhasimende -Italy amachibi. Futhi kuyichibi elikhulu kunawo wonke e-Italy, ukufinyelela kusukela emaweni alpine yasehlanzeni emaphethelweni esenyakatho Po Valley.
izindaba nakakhulu. indawo Lake Garda sika ulunika unyaka wonke sezulu esipholile lapho iminqumo ulamula zikhule kahle enyakatho ububanzi yabo evamile. Perfect abanye ntambama G&T! Faka isanti ende amabhishi futhi bamba amadolobha inala promenades ukubukwa. Niye got wena ephelele iholide uya khona!
#lago	#echibini	#ILakeComo	#IChibiGarda	#OkumaHlela	ukdec	Ama-italylake asenyakatho